Ndo Vine iyo Diamond muRough yeSocial Commerce? | Martech Zone
Ndo Vine iyo Diamond muRough yeSocial Commerce?
Chipiri, June 9, 2015 Muvhuro, June 8, 2015 Douglas Karr
Ndichiri ku IRCE, Ndakafara chaizvo apo mumwe mutauri, Danny Gavin, paakandimisa akandiudza kuti akange andiona ndichitaura makore apfuura pachiitiko muAustin. Danny ndomumwe wevatengesi vepamhepo veInternet… kusimudzira kushambadzira kwepamhepo kweInternet uye nhepfenyuro yemagariro enhau Brian Gavin Madhayamondi. Nehunyanzvi hwake, akabatsirwa kusimudzira BGD kumatanho eInternet Retailer eTop 1000 uye 50 Inokurumidza Kukura E-Commerce Makambani.
Tichagovana zvimwe zvezvinoshamisa BGD Muzambiringa zvishwe mukati meichi posvo kubva kuna Brian Gavin Madhayamondi, kuisa zvimwe zvinoonekwa kune maitiro avakaita chikuva.
Kubva Pfungwa kuenda Kugadzira
Ndakabvunza Danny kuti sei aivapo uye akandiudza kuti aitaura nezvekubudirira kunoshamisa uko BGD yakave nako anouya. Uye isu hatisi kutaura nhamba diki pano:
Ichishandisa Vine vanokurudzira, BGD yakakwanisa kusvika pamusoro pemamirioni matanhatu marupu paVine (iri vanhu vangangosvika mamirioni maviri) uye vanopfuura makumi mana nemakumi mana neshanu paTwitter.
Vavo Vine mushandirapamwe vakagashirwa kwakakwirira kubva kune akawanda mabhuku, pamwe nekuverengerwa # 2 chete kumashure kwaTiffany's ezvishongo zvezvitoro zvekushambadzira mishandirapamwe muna 2014 (JCK).
Kunyangwe kudzikira kwekukwikwidza kutengesa pakati peBlack Chishanu neKisimusi, BGD yakagamuchira rekodhi 45% YOY kukura pamwe ne13% YOY kukura muQ1 yegore ra2015.
BGD yakaona zvakare inoshamisa 20% yekuwedzera kwetraffic yakananga kune iyo webhusaiti kubva kune yekutanga hafu ya2014.
Iri harisi basa rakareruka rakapihwa makwikwi ane hukasha muindasitiri iyi. Brian Gavin Madhayamondi inozvibhadharira yakasarudzika tsika mutserendende nedhaimani e-tailer inovavarira kuwedzera chiziviso cheruzivo pamhepo ichikwikwidza nemari hombe yemabhajeti evakwikwidzi vayo.
Dambudziko nderekuti BGD yaida kutsvaga nzira inodhura yekukwikwidza nevakakwikwidza vepamhepo nevemuno kuburikidza nekushandisa vezvenhau izvo zvinomisikidza zita rekuzivikanwa kuwedzera webhu traffic uye kuwedzera kutengesa.
Danho raDanny raive rekugadzira inochinja-shanduka khalendari iyo yaibvumidza BGD kushandisa zviitiko zvinokodzera uye zvinoenderana nekuburitsa mavhidhiyo evhiki nevhiki ayo anonakidza uye anopenga pachikuva chinogoverwa zvakanyanya.
Vakagadzira pfungwa dzakatenderedza yedu yekunyora karenda, vakagadzira vhidhiyo zvemukati, uye vakaisimudzira kuburikidza nechavo nhepfenyuro nhepfenyuro pamwe neVine vapeseri vavanosvika.
Matauriro uye maitiro eiyo meseji yekusika yaive yekufananidza huvepo hwedu hwepamhepo nemufananidzo wedu wekunze wekunaka uye hunyanzvi. Kuti tikwikwidze nevakwikwidzi vebhajeti repamusoro, isu taifanira kusarudza svikiro ravaive nevatariri vavo (18-44), asi kwaive nevakwikwidzi vedu.
Nekushandisa Vine, BGD haina kungokwanisa chete kupinda muvateereri vadiki (18-20) papuratifomu, asiwo vateereri veTwitter (18-49) nekuda kwekugovana kukuru uye kusangana kwemapuratifomu maviri. Izvo zvirimo zvakajeka, zvinonakidza, uye zvakasarudzika, asi zvichimhanya nekukasira zvakakwana kuti zvinoda muoni kuti azvitarise zvakare.
The 4 Chikunguru
Aya marudzi emavhidhiyo anobatana kune nharembozha (inova skewing kune yakura yakadzidza huwandu hwevanhu) uye ipfupi zvakakwana kukanganisa uye kudzidzisa pasina kutambisa nguva yevaoni. Iyi nzira uye matauriro aishanda mukutyaira traffic kune webhusaiti pamwe nekutyaira kutengesa.
Kutenda kwakakosha kuna Danny nekundibatsira kuisa pamwe ichi posvo! Ive neshuwa yekushanyira Brian Gavin Madhayamondi yezvishongo zvako zvetsika!
Tags: brian gavin mangodanyaya yokudzidzadanny gavinzvekutengeseranazvemagariro ecommercemuzambiringamizambiringamuzambiringa nyaya yekudzidzamuzambiringa kutengesamuzambiringa zvishwemuzambiringa zvinoguma
Edza Makadhi paYouTube kuti Uwedzere Kubatanidzwa neVatariri
Dhijitari Kutengesa Mabhuku eSabhuku & Iyo Nyowani Era yekutengesa